काठमाडौंँ, असोज २५ गते । भ्रातृ सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घको विधानलाई लिएर नेपाली काँग्रेसभित्र विवाद बढेको छ । विवादकै कारण बिहीबार बस्ने तय भएको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक पनि स्थगित भएको छ ।
केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह के.सी. ले नेविसङ्घले सर्वसम्मतिले पारित गरेको विधानलाई बैठकमा प्रस्तुत नगरी अर्कै विधान बैठकमा प्रस्तुत गरिएपछि असहमति जनाएको बताउनुभयो । बैठकले ३२ वर्षसम्म उमेरका विद्यार्थीले मात्र सङ्गठनमा नेतृत्व लिन सक्ने निर्णय गरेको छ ।
यस विषयमा असहमति राख्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्व महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला र केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह के.सी.ले असहमति जनाउनुभएको थियो । नेता के.सी.ले केन्द्रीय कार्यसमितिले भ्रातृ सङ्गठनको विधानमा थपघट गर्न सक्छ तर भ्रातृ संस्थाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको विधान नै बैठकमा पेश नभएपछि बैठकमा सहभागी हुनुको औचित्य नै देखिँदैन भन्नुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीभित्रको विवादको बचाउ गर्दै महामन्त्री डा. शशाङ्क कोइरालाको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम जिल्लामा भएका कारणले बैठक स्थगित भएको जानकारी दिनुभयो । नेविसङ्घको विधान केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन नहुँदा महाधिवेशन नै हुने नहुने अन्योल भएको छ ।